Xarun shaqaalaysa waayeelka oo laga furay Stockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xarun shaqaalaysa waayeelka oo laga furay Stockholm
La daabacay fredag 17 augusti 2012 kl 14.37
Waayada danbe waxaa caadi soo noqonaya in dadka da'dooda tahay 65-sanno oo galay xiliga howgabnimada in ay sii shaqeeyaan. Arintaas ayaa keentay in suuq cusob furmo oo ay abuurmaan shirkado bemanningsföretag oo ay himiladooda tahay in shaqaaleeyaan dadka howl-gabka ah. Talaadadii waxaa laga furay Stockholm xarun cusob oo dadka howl-gabka ah laga shaqaalaysiiyo. Magnus Wadenstiern waxa uu madax ka yahay xaruntaan cusob ee laga furay Stockholm ee la yiraahdo Pensionärpoolen.
- Waxay ka shaqaynayaan xanaanada caruurta, cashar ka caawinta, nadaafada, iyo howlaha farsamadaa iyo wax kaloo badan, ayuu yeri.
Dadka shaqeeya markay dhaafaan da'da 65 sanno ayaa soo badanaya, sida ay muujinayso tirokoob laga soo xigtay shirkada qaabilsan gunooyinka howl-gabnimada AMF, waxaa tan iyo 2004 sii kordhay boqolkii 80 dadka da'dooda ka korayso 64 sanno ee sii shaqeeya., taas oo ka-micno ah in maantay tiro gaaraysaa 137 000 dadka dhaafay 64-sanno ay shaqeeyaan ayada oo weliba dadka da'dooda tahay 70-sanno jir ee shaqeeyaa ay korortay boqolkii 70 ilaa iyo 2004.
Laakiin dadka ay dhaafto da'dooda 67-sanno ayey dhamaan u suurta galin in ay ku sii raagaan shaqooyinkooda. Saas darteed ayey baryahaan u soo kordhahayeen shirkadaha bemaningsföretaga ah ee shaqaaleeya dadyowga howl-gabka ah. Sida ay qortay jariirada Dagens Industri shirkadaha bemaningsföretaga ee sida weyn u kobcaya ayaa ah shirkadaha howl-galiya dadywoga howl-gabka ah, ayada oo weliba lagu qiyaasayo in shirkadahaan dhaqliga ay ku fadhiyaan yahay wax kabadan 300 milyuunn oo karon. Weliba dowladda ayaa ka dhintay canshuuradka laga qaado shirkadaha wax shaqaaleeya ee la yiraahdo arbetsavgiftiga.
Xarunta Pensionärpoolen ayaa ka jirta lix gobal oo kamid ah dalka, talaadadiina Stockholm waxaa ka furay mid wasiirka waayeelka Maria Larsson, aadna u soo dhaweysay hirgelinta xaruumaha noocaan ah.
- Arintaan Sweden ayey u fiicantahay, adinka ayey idiin fiicantahay, macaamishiina way u fiicantahay, waa arin sadex goor leh faa'ido.
Magaalada Stockholm ayey tahay halka waayeelka ugu badan sii shaqeeyaan. Tobankii shan shacabka Stockholm ee da'dooda u dhaxayso 65 ilaa 74 ayaa sii shaqeeya, halka marka loo barbar dhigo gobalka Norrbotten ay boqolkii toban sii shaqeeyaan.
Ingmar Lodenberg waa 65 sanno.jir, waxa uu pension galay bishii mars. Inta uusan howl-gabnimada galin waxa uu madax ka ahaa baqaar mudo 20-sanno ah. Maantay waxa uu u tagaa shirkadaha iyo guriyaha dadka oo uu ka caawiyaan howlaha sahlan ee farsamada. Laakiinse waxa uu jeclaan lahaa in uu sii haysto dhowr sanno shaqadiisii hore.
- Waxay ila tahay in aan iskugu waci karo dhibaato xaliye, dabcan howsha waxaa igu dhaliyey in aan sii wado waxa weeye aniga oo u arka in tahay mid farxad leh, ayuu yeri.
Xarumaha Pensionärpoolen ayaa soo bilowmay bishii Januari waxaana shaqooyin ka soo doontay boqolaal dooonaya si ay daqligooda kordhiyaan,balse arinta soo jiidata dadyowga howl-gabkaa ayaa ah sidii ay dadka kale ula kulmi lahaayeen, sida ay qabaan Ingmar Lodenberg iyo Ossi Jansson oo 70- jiro ah, rabana in ay sii shaqeeyaan inta ay awoodaan.
- Hadanan shaqayn lahayn asbuuca oo dhan waxa aan dhex fadhiyi lahaa guriga oo baari lahaa taariiqda rixinkeyga, waxay taas iga dhigi lahayd qof guuni socod ah, wax farxad leh ma ahan in aad la kulmin saaxibaadaa, waa in aan ka baxo afarta darbi ee wareegsan ee guriga,
- Sab kalena waxa weeye xaskeyga labo sanno ayey iga yar tahay, marka yada ayaan sugayaa si aan ugu soo raxaysano gurigeena ku yaal jasiiradaha Skärdgården, ayuu Ingarmar Lodenberg.
Dadyowga howl-gabka garay badankood in ay sii shaqeeyan bay rabaan, ayey aaminsantahay Ossi Jansson.
- Haa waan aaminsanahay taas, in inta badan rabaan in ay sii shaqeeyaan, badankood gunooyinka howl-gabka ay qataan way yar tahay, waxayna rabaan in ay dareemaan in loo baahanyahay waayo dadka oo dhan ayaa raba in ay dareemaan in loo baahayahay, ayey tiri.
Magnus Waderstierna waxa uu dareensayahay in qaar badan ay shaqoyiin u raadsadaan si ay bulsho ula kulmaan.
- Waxaan bilkasta u qabanaa kulmo, si ay arinta ugu badanaanto shaqo kaliya oo aan u abuurno dareen wada jireed, qaar badan ayaa ku kulma banaanka shaqada oo saaxiib isku adag noqda, nasiib xumo Stockholm waxaa ku badan kali ahaanshaha.
Laakiin Magnus ma aaminsana in dadyowga howl-gabka ah kula tartami doonaan dhallinyarada suuqa shaqada, macaamiishiisa oo ka kooban shirkado iyo dadka caadigaa ayaa doonaya dadyow ah howl-gab. Suqaas shaqadana ma jiri lahayn la'aantood ayuu aaminsanyahay.
- Boqolkii 99 macaamiishaydo waxay doonayaan in qofka aan u soo dirayno uu yahay qof howl-gab ah, taas oo ka micno ah in waxa suuqo u baahanyahay tahay dadowga pensionka ah.
Laga soo bilaabo 2001 ayuu ruuxa doonaya in uu sii shaqeeyo inta uu ka gaarayo 67-sanno xag u yeeshay in uu saas sameeyo, dowladdana waxa ay hada ka baaran degaysaa sidii loogu sahli lahaa dadka 65 gaaray ee raba in ay shaqadooda ku sii ragaan, wasiirka waayeelka Maria Larsson.
- waxaan u jeedna faa'idooyin waaweyn oo ay arintaas lee dahay, oo nagu kaliftay in aan arintaan il gooniya ku fiirino, sababta koobaadna waxa weeye, waxaa jira dadywo pension ah oo xoog leh caafimaadna qaba oo raba in ay sii shaqeeyaan. Ka dowladda ahaan waano taageernay arintaan inagoo labo jibaar ka dhinay canshuurta shaqada qofka sii shaqeynaya, waxaanu samaynay fursad siinaysa qofka in uu sii shaqeeyo ilaa 67-sanno, hadana waxaa fiirinaynaynaa sidaan da'daas u kordhin lahayn si aan u dhiiri galino kuwo raba in ay sii shaqeeyaan oo awooda, laakiin waa in ay ahaataa mid ku dhisan rabitaanka qof ee aan qasab ku dhisnay, ayey tiri
Maria Larson ayaa aminsan in sii shaqaynto ay tahay wax caafimaadka u fiican, hadii qofka aysan ku dhicin jiro weyn. Waxayna sidoo kale u aragtaa xarumaha Pensionärpoolen kuwo wanaagsan oo ay tiri waxaa laga yaabaa in aan maalin iska diiwaan geliyo markaan gaaro da'weyn.
Warsame Elmi/Jenny Hallberg